39 Zvino Josefa, akaendeswa kuIjipiti,+ Potifari,+ jinda raFarao, mukuru wevarindi, muIjipiti, akamutenga paruoko rwevaIshmaeri+ vakanga vaenda naye ikoko. 2 Asi Jehovha akava naJosefa, zvokuti akava murume anobudirira+ uye akava mutarisiri weimba yatenzi wake, muIjipiti wacho. 3 Tenzi wake akaona kuti Jehovha akanga ainaye uye kuti zvose zvaakanga achiita, Jehovha akanga achiita kuti zvibudirire paruoko rwake. 4 Josefa akaramba achinzwirwa nyasha naye, akaramba achimushandira, zvokuti akamugadza kuti atarisire imba yake+ nezvose zvaiva zvake akazviisa muruoko rwake. 5 Kubvira panguva yaakamugadza kuti atarisire imba yake uye kuti atarisire zvose zvaiva zvake, Jehovha akaramba achikomborera imba yomuIjipiti wacho nokuda kwaJosefa, uye chikomborero chaJehovha chakava pazvose zvaaiva nazvo mumba nomumunda.+ 6 Akazosiyira zvose zvaiva zvake muruoko rwaJosefa;+ aisaziva zvaaiva nazvo zvachose kunze kwezvokudya zvaaidya. Uyezve, Josefa akava nechimiro chakanaka nechitarisiko chakanaka. 7 Zvino pashure pezvinhu izvi, mudzimai watenzi wake akatanga kutarira Josefa+ achiti: “Rara neni.”+ 8 Asi airamba+ uye aiti kumudzimai watenzi wake: “Tarirai tenzi wangu haazivi zvandinazvo mumba, nezvose zvaanazvo akazviisa muruoko rwangu.+ 9 Hapana mukuru kundipfuura mumba muno, uye haana kana chaakandirambidza kunze kwenyu, nokuti muri mudzimai wake.+ Naizvozvo ndingaita seiko chinhu ichi chakaipa kwazvo, nditadzire Mwari?”+ 10 Zvino zvaaitaura naJosefa zuva nezuva kuti arare naye uye arambe ainaye, iye aisambomuteerera.+ 11 Asi pazuva iri semamwe mazuva Josefa akapinda mumba kuti aite basa rake, uye mumba macho makanga musina kana nomumwe wevarume veimba yacho.+ 12 Mukadzi wacho akabva abata nguo yake,+ achiti: “Rara neni!”+ Asi iye akasiya nguo yake muruoko rwake, akatiza, akabuda panze.+ 13 Naizvozvo paakangoona kuti akanga asiya nguo yake muruoko rwake kuti atizire panze, 14 akatanga kushevedzera kuvarume veimba yake akati kwavari: “Tarirai! Akatiunzira murume, muHebheru, kuti atiite chiseko. Auya kwandiri kuti arare neni, asi ndaridza mhere kwazvo.+ 15 Paangonzwa kuti ndashevedzera ndikaridza mhere, abva asiya nguo yake pedyo neni akatiza, akabuda panze.” 16 Pashure paizvozvo akachengeta nguo yake iri pedyo naye kusvikira tenzi wake auya kumba kwake.+ 17 Akabva ataura naye maererano nemashoko aya, achiti: “Mushandi muHebheru wawakatiunzira auya kwandiri kuti andiite chiseko. 18 Asi pandangoshevedzera ndikaridza mhere, abva asiya nguo yake pedyo neni akatizira panze.”+ 19 Tenzi wake paakangonzwa mashoko omudzimai wake aakamuudza, achiti: “Mushandi wako andiitira izvi nezvizvi,” akatsamwa kwazvo.+ 20 Naizvozvo tenzi waJosefa akamutora akamuisa mujeri, nzvimbo iyo vasungwa vamambo vaichengetwa vakasungwa, akaramba ari mujeri imomo.+ 21 Zvisinei, Jehovha akaramba aina Josefa, uye akaramba achimuitira mutsa worudo uye achiita kuti anzwirwe nyasha nomukuru mukuru wejeri.+ 22 Naizvozvo mukuru mukuru wejeri akaisa vasungwa vose vaiva mujeri muruoko rwaJosefa; uye zvinhu zvose zvavakanga vachiita imomo ndiye aiita kuti zviitwe.+ 23 Mukuru mukuru wejeri akanga asina kana chaaitarisira chaiva muruoko rwake, nokuti Jehovha akanga aina Josefa uye Jehovha aiita kuti zvaakanga achiita zvibudirire.+